ဘောလုံးဟောကိန်းများ Santos Laguna vs Monterrey 27 September 2021
မက္ကစီကို Liga MX 2021
Sep 27, 2021 - 0:06
ရေနံချောင်း ခန့်မှန်းချက် — 0ခန့်မှန်းချက်များ
ဒီမှာ ပွဲ၏အခမဲ့ဟောကိန်းများ Santos Laguna vs Monterrey ဒီ၏ Sep 27, 2021 ယှဉ်ပြိုင်မှုအတွက် မက္ကစီကို Liga MX 2021
လောင်းကစားခြင်းအတွက်အခမဲ့အကြံဥာဏ်များကားအဘယ်နည်း Santos Laguna vs Monterrey?
မက္ကစီကို Liga MX 2021 ဒီနေ့ခန့်မှန်းချက်ကဘာလဲ?
များအတွက်ဘောလုံးဟောကိန်းများကဘာလဲ Sep 27, 2021?
၏နှိုင်းယှဉ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲခန့်မှန်းချက် Sep 27, 2021
ခန့်မှန်းခြင်းနည်းလမ်း - bet-in-asia.com ဆိုဒ်သည်ကိန်းဂဏန်းများအနက်နှင့်ရာခိုင်နှုန်း၏အနက်ကိုအခြေခံသည် သင်္ချာပုံသေနည်း ၎င်း၏ပေးရရှုပ်ထွေးဒေတာ၏ ရလဒ်များကိုအခမဲ့ဟောကိန်းများ အပေါ် Santos Laguna vs Monterrey အစည်းအဝေး။ လုပ်ခွင့်ပြုသည့် technique ကို တိကျသောခန့်မှန်းချက်များ ထိုနေ့၏ပွဲစဉ်ပေါ်မှာ မက္ကစီကို Liga MX 2021 of Sep 27, 2021
အဆိုပါ Datasets ဖို့အသုံးဝင်သောဖြစ်ပါတယ် အွန်လိုင်းလောင်းကစားကိုကူညီပါ သင့်ရွေးချယ်မှုအတွက်လောင်းကြေးကမ်းလှမ်းမှုတွင် - 1x2 Santos Laguna အနိုင်ရ၊ Monterrey အနိုင်ရ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အရေအတွက် sဒီပွဲမှာဒါမှမဟုတ်ရမှတ်ထဲမှာသွင်းယူခဲ့ကြပါတယ် အတိအကျရမှတ်.
၏ရည်မှန်းချက် A. González
အစားထိုး J. Díaz
အားဖြင့် A. Cervantes
အစားထိုး J. Carrillo
အားဖြင့် F. Otero
အစားထိုး A. González
အားဖြင့် J. Alvarado
၏ရည်မှန်းချက် B. Lozano
အစားထိုး E. Aguirre
အားဖြင့် J. Ocejo
အစားထိုး B. Lozano
အားဖြင့် I. Jeraldino
အစားထိုး D. Valdés
အားဖြင့် R. Prieto
အစားထိုး S. Vegas
အားဖြင့် D. Vergara
၏ရည်မှန်းချက် D. Vergara
assist M. Meza